November 2017 - မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
Computer software Driver Tools Drivers PC Drivers
Maung Pauk at 2:59:00 PM 0
Computer ေတြ Windows တင္ၿပီးတဲ့အခါ Driver ေတြတင္ဖို႔အတြက္ DriverPack Solution ဟာ အေကာင္းဆံုးနဲ႔ အစံုဆံုးပါ.. ခုေနာက္ဆံုးထြက္လာတဲ့ 17.7 မွာေတာ့ 2017 ခုႏွစ္အတြင္ ေနာက္ဆံုးထြက္ PC Hardware ေတြရဲ႕ Driver ေတြကို အမွန္ကန္ဆံုး အေထာက္အပံ့ေပးထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္..
Computer တွေ Windows တင်ပြီးတဲ့အခါ Driver တွေတင်ဖို့အတွက် DriverPack Solution ဟာ အကောင်းဆုံးနဲ့ အစုံဆုံးပါ.. ခုနောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ 17.7 မှာတော့ 2017 ခုနှစ်အတွင် နောက်ဆုံးထွက် PC Hardware တွေရဲ့ Driver တွေကို အမှန်ကန်ဆုံး အထောက်အပံ့ပေးထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်..
All drivers onasingle DVD-ROM Simplify downloading new drivers from the Internet.
Supports all modern operating systems! Asa32-and 64-bit versions! Install all the drivers on virtually any computer for only about5minutes.
Scans, installs or updates drivers. Supports for all device drivers.
Download DriverPack Solution (2018) 17.7 ISO : 15 GB
Phone Application Samsung Samsung Firmwares Samsung Rooting
GALAXY S8 SM-G950U Root File,Combination File And Firmware Update
Maung Pauk at 11:23:00 PM 0
Download GALAXY S8 SM-G950U Combination File
File Type: Combination
Size: (858 MB)
Version: CF Auto Root 7.0
File Type: ROOT
Download GALAXY S8 SM-G950U USA (T-Mobile) Firmware
Download GALAXY S8 SM-G950U USA (ACG / CSpire) Firmware
Download GALAXY S8 SM-G950U USA (USC) Firmware
Download GALAXY S8 SM-G950U USA (VZW) (LRA) Firmware
Ref : t-flash
Maung Pauk at 9:46:00 PM 0
Wondershare Data Recovery ဟာ မှားဖျက်မိတဲ့ဖိုင်တွေ၊ Virus ကြောင့် ပျက်သွားတဲ့ဖိုင်တွေ၊ ရုတ်တရက် မီးပြတ်သွားလို့ ကွန်ပျူတာ ပါဝါပိတ်သွားပြီး ပျောက်သွားတဲ့ ဖိုင်တွေ၊ Format ချမိတဲ့ဖိုင်တွေကိုပါ ပြန်ရှာပေးနိုင်ပါတယ်.. ကွန်ပျူတာသုံး Hard disk, External Hard Disk Drive, Memory Stick, SD Card, Memory Card, Floppy Disk, Zip Disk, iPod (Nano, Classic & Shuffle), Cell Phones: Black Berry, Nokia, Android phone စတဲ့ Storage Device အမျိုးမျိုး ပေါ်က ဖိုင်စနစ်ပေါင်း ၅၀၀ ကျော်ကို ရှာပေးနိုင်ပါတယ်.. မြန်လည်းမြန်တယ်..
Crack ထဲက ဖိုင္နဲ႔Folder ကိုကူးၿပီး Install Directory ထဲကိုထည့္လိုက္.. Overwrite ေတာင္းရင္ သေဘာတူလိုက္ပါ..
Setup နဲ့ Install လုပ်.. ပြီးခါနီးမှာ Launch ဘေးက အမှန်ခြစ်ကိုဖြုတ်ပြီး finish ကိုနှိပ်..
Crack ထဲက ဖိုင်နဲ့Folder ကိုကူးပြီး Install Directory ထဲကိုထည့်လိုက်.. Overwrite တောင်းရင် သဘောတူလိုက်ပါ..
( Install Directory ကိုသွားဖို့က လွယ်ပါတယ်.. Desktop ပေါ်က Wondershare Data Recovery icon ကိုညာကလစ်ထောက်ပြီး Open File Location ကိုနှိပ်လိုက်ရင် ရပြီ.. )
Knowledge Mobile Knowledge Xiaomi
Xiaomi Account Lock မက်ေအာင္ User ေတြအေနနဲ့ သတိထားသုံးသင့္တဲ့အခ်က္
Maung Pauk at 10:13:00 PM 0
Xiaomi စမတ္ဖုန္းေတြမွာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား Account Lock က်တဲ့ျပသနာေတြေတြ႕ေနရပါတယ္။
Mi Account သုံးထားျပီး ေပးထားတဲ့ Password မမွတ္မိေတာ့တဲ့အခါ ဒီျပသနာေတြနဲ႕ရင္ဆုိင္ရမွာပါ။
သုံးေနတုန္းေတာ့ ဘာမွမျဖစ္ေပမဲ့ Reset ခ်လိုိက္တာတုိ႕ Firmware ျပန္တင္တဲ့အခါတုိ႕မွာ ျပန္ျပီး
Activate လုပ္တဲ့အခ်ိန္ Mi Account သုံးထားမိရင္ ျပန္၀င္ခုိင္းတာပါ။ သူက password ပဲေတာင္း
တာျဖစ္ေပမဲ့ ကုိကမမွတ္မိေတာ့ တုိင္ပတ္တာေပါ့ဗ်ာ ။ ဒါေၾကာင့္ ၾကိဳတင္ျပီး ဘယ္လုိသုံးသင့္လည္းဆုိတာကုိ က်ေတာ္အၾကံျပဳေပးလုိက္ပါတယ္။
က်ေတာ္တုိ႕ Account ျပဳလုပ္တဲ့အခါ Password ေပးရင္ မွတ္မိလြယ္တဲ့ ကုိ႕ရဲ႕နံပါတ္ေလးေတြ
ေပးထားသင့္ပါတယ္။ ေနာက္ျပီး စစဖြင့္တဲ့အခါ Gmail ေတာင္းရင္ေတာင္းတဲ့ Gmail ရဲ႕ Account နဲ႕
ဒါ့အျပင္ ဒီလုိမမွတ္ခ်င္တဲ့သူေတြအတြက္ေတာ့ နည္းလမ္းေကာင္းေလး တစ္ခုရွိပါတယ္။ ဒါကေတာ့
Mi Account Sign-in ၀င္ျပီးတဲ့အခါမွာ Mi Cloud ဆုိတဲ့ထဲကုိ၀င္ပါ။ အဲဒီထဲမွာ FInd Device
ဆုိတာေလးေတြ႕ပါမယ္။ အဲေကာင္ေလးကုိ Off ျပီးသုံးပါ။
ဒါဆုိရင္ေတာ့ Mi Account Lock အတြက္ စိတ္မပူရေတာ့ပါဘူး။
Xiaomi စမတ်ဖုန်းတွေမှာ တော်တော်များများ Account Lock ကျတဲ့ပြသနာတွေတွေ့နေရပါတယ်။
Mi Account သုံးထားပြီး ပေးထားတဲ့ Password မမှတ်မိတော့တဲ့အခါ ဒီပြသနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာပါ။
သုံးနေတုန်းတော့ ဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့ Reset ချလိုက်တာတို့ Firmware ပြန်တင်တဲ့အခါတို့မှာ ပြန်ပြီး
Activate လုပ်တဲ့အချိန် Mi Account သုံးထားမိရင် ပြန်ဝင်ခိုင်းတာပါ။ သူက password ပဲတောင်း
တာဖြစ်ပေမဲ့ ကိုကမမှတ်မိတော့ တိုင်ပတ်တာပေါ့ဗျာ ။ ဒါကြောင့် ကြိုတင်ပြီး ဘယ်လိုသုံးသင့်လည်းဆိုတာကို
ကျတော်တို့ Account ပြုလုပ်တဲ့အခါ Password ပေးရင် မှတ်မိလွယ်တဲ့ ကို့ရဲ့နံပါတ်လေးတွေ
ပေးထားသင့်ပါတယ်။ နောက်ပြီး စစဖွင့်တဲ့အခါ Gmail တောင်းရင်တောင်းတဲ့ Gmail ရဲ့ Account နဲ့
ဒါ့အပြင် ဒီလိုမမှတ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ နည်းလမ်းကောင်းလေး တစ်ခုရှိပါတယ်။ ဒါကတော့
Mi Account Sign-in ဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာ Mi Cloud ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပါ။ အဲဒီထဲမှာ FInd Device
ဆိုတာလေးတွေ့ပါမယ်။ အဲကောင်လေးကို Off ပြီးသုံးပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ Mi Account Lock အတွက်
Android Tool Phone Application Tool
Maung Pauk at 9:29:00 PM 0
Format All နဲ႔မေရးထားရင္ Firmware ေတြ 4/5ဖိုင္ ဆက္တိုက္မေရးထားရင္ ဒီဖိုင္ေလးနဲ႕ ျပန္ကယ္လို႕ရပါတယ္ခင္ဗ်ာ..
[Format All နဲ့မရေးထားရင် Firmware တွေ 4/5ဖိုင် ဆက်တိုက်မရေးထားရင် ဒီဖိုင်လေးနဲ့ ပြန်ကယ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ]
Vivo Y22 Dead Fix File Download : 5.01 MB
Mi A1 ဖုန္းေတြအတြက္ root မလိုပဲ ျမန္မာေဖာင့္ 100% မွန္ကန္ေစမယ့္ tool ေလးထြက္ရွိလို႔လာပါၿပီခင္ဗ်ာ
Anonymous at 9:23:00 PM 0
Mi A1 ဖုန္းေတြအတြက္ root မလိုပဲ ျမန္မာေဖာင့္ 100% မွန္ကန္ေစမယ့္
tool ေလးထြက္ရွိလို႔လာပါၿပီခင္ဗ်ာ <3 <3 <3
၁။ ဖုန္းကို USB Dubugging On ထားေပးၿပီး ႀကိဳးထိုးပါ
၂။ Install ကိုႏွိပ္ပါ ဖုန္းပိတ္သြားၿပီး Loading မ်ားၿပီးလို႔
ျပန္ဖြင့္လာခ်ိန္မွာေတာ့ ျမန္မာေဖာင့္ 100% မွန္သြားပါလိမ့္မယ္။
[Mi A1 ဖုန်းတွေအတွက် root မလိုပဲ မြန်မာဖောင့် 100% မှန်ကန်စေမယ့် tool လေးထွက်ရှိလို့လာပါပြီခင်ဗျာ <3 <3 <3
၁။ ဖုန်းကို USB Dubugging On ထားပေးပြီး ကြိုးထိုးပါ
၂။ Install ကိုနှိပ်ပါ ဖုန်းပိတ်သွားပြီး Loading များပြီးလို့
ပြန်ဖွင့်လာချိန်မှာတော့ မြန်မာဖောင့် 100% မှန်သွားပါလိမ့်မယ်။]
Sponsored by JWK Myanmar Company Limited
Driver မ်ားမရွိလွ်င္ http://www.mediafire.com/?yl5l8ljgyukbyl8 (မသြင္းရေသးလွ်င္သြင္းထားရပါမယ္)
Download : 29.45 MB